ओलीले आज प्रचण्ड-माधवलाई प्रहार गरेका यी ६ राेचक र घाेचक व्यांगे
पुस १८, काठमाडाैं ।
नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्को समूहको नेतत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई विभिन्न राेचक र घाेचक प्रश्नले प्रहार गरेका छन् । काठमाडौं जिल्लास्तरीय भेलालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै ओली प्रचण्ड र नेपालप्रति व्यांंग्यात्मक रुपमा कडा ढंगले प्रस्तुत भए ।
प्रचण्ड र नेपाल कुहिएर झरेका फल
कार्यक्रममा बाेल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र नेपाललाई भेट्नु कुहिएर झरेका फलको संज्ञा दिएका छन् । ओलीले एकताको तीन वर्षसम्म पार्टी हलनचल भएको बताए ।
ओलीले अर्का समूहले असली हामी हौं भनेर निवेदन हालेको भनेर निर्वाचन आयोगबाट शुक्रबार एउटा पत्र प्राप्त भएको बताए । अघि भने, ‘असली र नक्कली भन्न यो बरमझियाको बुढाको पेडा पसल हो ?’
प्रचण्ड–नेपाल खिया लागेको नटबल्टु
ओलीले प्रचण्ड–नेपाललाई खिया लागेको नटबल्टुको संज्ञा समेत दिए । उनले भने, समस्या कहाँ रहेछ ? खिया कहाँ लागेको रहेछ ? दुइटा नटबोल्ट फेर्दा गाडी अगाडि ।’
‘हामीले फेरेको पनि होइन, आफैं फुक्लिए नटबोल्ट’ उनले हाँस्दै भने, ‘खिया लागेको दुइटा नटबोल्ट के खुस्किएको थियो, पार्टी गतिका साथ अगाडि गयो ।’
सुन्तला खान सल्लाघारी गएर पद पाइन्छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन्तला खान सल्लाघारी जाँदा पद नपाइने टिप्पणी गरेका छन् । उनले प्रचण्ड र नेपाललाई इंगित गर्दै पद चाहिने भए बैठकमा आउनुपर्ने समेत बताए ।
उनले भने, माथिका नेताहरुलाई मात्र पद र कुर्सी चाहिएको छ। पद चाहिएको भए बैठकमा पो आउनुपर्छ त। सुन्तला खान सल्लाघारी गएर हुन्छ ? उनले बैठकमा उपस्थित नभएकाहरूले एउटा भेला गरेको र अर्को थरीले अर्को नारा लगाएको समेत बताए ।
ओलीले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल चिनिन थालेको बताएका छन् । उनले भारतमा समेत नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर आफूलाई चिनेको टिप्पणी गरे ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहको हालत रत्नपार्कमा औषधि बेच्नेको जस्तै हुन्छ
ओलीले नेकपाबाट फुटेर गएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको हालत रत्नपार्कमा औषधि बेच्नेको जस्तै हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘गन्तव्यमा पुग्न त राजनीतिक एजेन्डा हुनुपर्‍यो नी । उहाँहरुको एजेन्डा देश होइन, जनता होइन, संविधानको रक्षा होइन । रन्नपार्कमा औषधि बेच्नेले पनि केही मानिस जम्मा गरेको हुन्छ अब उहाँहरुको अबको हालत त्यस्तै हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड–नेपाल समूहले निवार्चन आयोगमा बुझाएको सूर्य चिन्ह र आधिकारिक पार्टीको दाबीपत्रलाई निर्वाचन आयुक्त धेरै दिन हासेको बताए ।
ढुंगो बोल्ला तर उहाँहरुकाे आकांक्षा बाेल्दैन
उनले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई राष्ट्रिय आकांक्षा नै थाहा नभएको भन्दै ढुंगो बोल्ला तर उनीहरू नबोलेको बताए । उनले भने, राष्ट्रिय आकांक्षाको विषयमा बरु ढुँगा बोल्ला तर उहाँहरू किन बोल्नुहुन्न ?
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन्
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नहुने बताएका छन्। उनले देश चुनावमा गइसक्यो भन्दै संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर कसले भन्यो? भनी प्रश्न सोधे।
‘संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा भइरहेका छन्, कहाँबाट आयो यो? निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय चुनावमा लागिसके,’ उनले भने।
ओलीले देशमा अस्थिरता र लोकतन्त्र खतरामा परेपछि संविधानसभा विघटन गरेको बताए। उनले आफूलाई स्थापित भन्ने मिडियामा भड्काउन जाली र प्रायोजित समाचार आउने गरेको दाबी गरे।
ओलीले आफूले नेतृत्व गर्न पाइराख्यो भने देश सर्लक्कै देश खायो भनेर केही मान्छेलाई भत्भती पोलिरहेको बताए।
भारतका हरेक व्यक्तिलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा छ
ओलीले भारतका हरेक मानिसलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा भएको बताएका छन् । आफ्ना कारण नेपालको नाम अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन आफू सफल भएको र भारतका हरेक मानिसले नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम कण्ठ भएको उनले बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा धेरै विकासका काम भएको भन्दै आफ्नै तारिफ गरेका हुन् । उनले आफ्नो नेतृत्वमा रानीपोखरी र धरहरा २२ तला बनिसकेको बताए ।
‘यसवीचमा असाधारण र दुनियाँ आश्चयचकित हुननेगरी आर्थिक बृद्धि र प्रगति भएको छ । विश्वमा नेपाल कहाँ छ ? थाहा थिएन । अहिले नेपाल कहाँ छ, थाहा छ । पहिले नेपालको प्रधानमन्त्रीको चर्चा पनि हुँदैनथियो । अहिले भारतका हरेका मानिसलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम सोध्यो भने कण्ठै छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।
उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा ठिक छ भनेको भन्दै चिनियाँ राष्ट्रपतिले समेत यो राष्ट्रिय आकाँक्षा ठिक भएको र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गरे ।
भाषणको अधिकाँश समय ओलीले प्रचण्ड नेपालको आलोचना गर्न र आफूले गरेका कामको प्रशंसामा विताएका थिए । उनले सुरुगमार्ग, रेलमार्ग सडकमार्ग धमाधम भइरहको भन्दै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि विस्तार भएको बताए ।
कार्यक्रममा कालो टोपी, मास्क र गलबन्दी लगाउन निषेध
यसैबीच ओली समुहकाे आजकाे कार्यक्रमहरुमा कालो मास्क कालो टोपी र कालो गलबन्दी लगाउन निषेध गरिएको थियाे । कार्यक्रममा कालो टोपी, मास्क र गलबन्दी लगाउनेहरुलाई प्रतिबन्ध गरिएको थियाे ।